Zimbabwe's Dynamos Ready for CAF Champions League Test With TP Mazembe
Dynamos defender David Kutyauripo said that although he has been sidelined for a month with an ankle injury he should be recovered in time to tackle TP Mazembe
Members of Zimbabwe's Dynamos Football Club are looking forward to their match with TP Mazembe of the Democratic Republic of Congo in the group stage of the Confederation of African Football Champions League in July.
Dynamos defender David Kutyauripo told VOA Studio 7 reporter Marvellous Mhlanga-Nyahuye that although he has been sidelined for a month with an ankle injury he should be fully recovered in time for the TP Mazembe match.
Elsewhere, reports said North Korea missed a deadline to confirm it would take up a Zimbabwean Government invitation to train in the country for the World Cup Soccer. The Associated Press reported that officials in Harare said they did not expect the North Koreans to make Zimbabwe their base for the World Cup of soccer.
The government’s invitation to North Korea sparked protests by Matabeleland activists who said the team’s presence in the country would revive painful memories of the 1980s conflict commonly referred to as Gukurahundi.
A Zimbabwean military unit trained by the North Koreans was accused of massacres during the conflict, in which one investigation of the conflict says several thousand Matabeleland civilians died, and possibly more.
Education, Culture and Sports Minister David Coltart told VOA on Tuesday that as he had not been informed of any confirmation by North Korea up to the present date he assumed the team would not be coming to Zimbabwe.
Interview with David Kutyauripo